Daawo sawirrada: Qoys gurigooda ku xanaaneeya Duur-joogta ugaarsiga ku dhiban. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Daawo sawirrada: Qoys gurigooda ku xanaaneeya Duur-joogta ugaarsiga ku dhiban.
Daawo sawirrada: Qoys gurigooda ku xanaaneeya Duur-joogta ugaarsiga ku dhiban.
Posted by: radio himilo August 27, 2017
Muqdisho – Xarunta Animal Ark waa goob gaar loogu xanaaneeyo duur-joogta Maharashtra ee dalka Hindiya taas oo qaabisha xayawaannada aqoontoobay lana ugaarsaday waalidiintii dhalay. Waxaa dhisay mid kamid ah dhaqaatiirta xaafadda kaas oo fahmay lagama haraanka ugaarsiga, hayeeshe aan haddana oggolaanin in ilmaha yar ay macluul iyo agoonnimo u dhintaan.
Maalin, waqtigii 70-meeyada, isaga iyo afadiisa oo maraya keynta Dandarayana ayay la kulmeen koox ugaarsato ah oo sidata Daaxuur ay disheen. Waxay ogaadeen in dhasheedana ay duurka ku jiraan. Waxay ahayd dhacdo tiiraanyo leh. Dr. Prakash wuxuu go’aansaday inuusan u idmin inay ilmahana ugaarsadaan. Sidaas darteed wuxuu siiyay badal ay isaga dhaafaan. Way aqbaleen: ilmihii agoomoobayna waxay xubin ka noqdeen qoyskii ballaarnaa ee dhaqtarka.
Intaasna kuma harin. Maadaama uu ogaa in ugaarsiga ka jira keynta Dandarayana aysan lahayn xeer iyo xad, wuxuu ugaarsatada weydiistay inay u keenaan ilmaha yaryar oo ay waalidkii dhalay ka disheen. Wuxuu fahamsiiyay in saxamada reerahooda aysan wada buuxin karin hilibka duur-joogta yaryarka ah. Taas baddalkeedana uu siinayo lacag, bariis ama daweyn caafimaad. Way aqbaleen, kadibna gurigii dhaqtarka wuxuu isku rogay xarun duurjoog.
40-kii sano ee lasoo dhaafay, Dr. Prakash wuxuu hoygiisu gabaad u ahaa xayawaanno kala jaadad ah: dugaag iyo ugaar labadaba – Haramacad, Yaxaas, Deero, Daaxuur iyo inta lamidka ah.
Tilmaan ahaan, hoygiisu mar wuxuu qaabilay nolosha 300 oo xayawaanno kala duwan ah. Cabsida badan oo dadku ay ka muujiyeen marti-gelintiisa, daganayaasha xaafadda ku nool waxay ka cowdeen la deris noqoshadiisa.
Sidaas darteed, dhismo adag iyo xeyn-daab ka fog bartamaha xaafadda ayuu ka sameeyey hoygooda. Balse wali taasi ma hakin dareenka baqdinta leh ee laga qabo duur-joogta.
Hadda hoygiisa waxaa kula nool 90 xayawaanno duurjoog ah. Waxaase la filayaa inay hoos isku dhimaan maadaama qabiilka Madia ee ugaarsiga ku caan baxay aysan quudarreynayn joojinta ku tiirsanaanta ugaarsiga.
Previous: Man City oo dirqi kaga adkaatay naadiga AFC Bournemouth.
Next: Daladda ugu ballaaran adduunka oo laga sameeyey Magaalada Makka.